Mimwe Yakavhurika Sosi Yega Player Player Mitambo | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, GNU/Linux, Linux Mitambo
Neverball ndeye yakavhurwa sosi imwechete mutambi mutambo. Tinofanira kufambisa bhora kunotora mari.
Mune dzino nguva dzevazhinji uye mitambo yepamhepo, kune zvakare nzvimbo yemamwe marudzi ezvirongwa. Ndosaka tichidaro runyorwa diki reakavhurika sosi yemumwe mutambi mitambo.
Neraki, iyo nguva yakapfuura apo chikumbiro chemutambo weLinux chaive chakashata. Kunyangwe mamiriro acho asina kukwana nhasi, pane chikonzero chekutarisira. Zvichakadaro, iwe unoziva zvekuzvivaraidza nazvo.
5 Super Tux Kart
Denga risingagumi es kurwisa 2d uye mutambo wekutengesa wakaiswa muchadenga. Izvo zvakafanana neyechinyakare Escape Velocity akateedzana.
Iwe unogona kuongorora dzimwe nyeredzi masisitimu. Izvo zvinokwanisika kuwana mari nekutengesa, kutakura vafambi kana kupedzisa mamishini. Nezvakawanikwa iwe unogona kutenga ngarava iri nani, kusimudzira zvombo kana kusimudzira chikepe chako chazvino.
Kana iwe uchida kurwa, unogona kuputika zvikepe zvepirate kana kutora mativi muhondo yevagari vemo.
Iwe uri Star Trek fan? Siya nzvimbo yemunhu kumashure uye enda unotsvaga vatorwa vane hushamwari vane tsika dzakapfuma kupfuura dzako.
Kudhanilodha kunowanikwa kweMac OS X neWindows. Zvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux zvinotsigirwawo.
Pamitambo yakavhurika sosi yemutambo mutambi wandinoziva, ichi ndicho chimwe chevanonyanya kupindwa muropa.
Neverball yakavakirwa pa Super Monkey Bhora franchise. Mutambo uyu unosanganisira kutamisa bhora kuenda kune chinangwa uchiunganidza mari. Kune mazana zana ezviitiko. Dzimwe nguva zvinotora imwe nhamba yemari yemari kupedzisa danho.
Huru hutsva ndewekuti pachinzvimbo chekutungamira bhora, izvo zvatinodzora negonzo ndiyo nhanho. Maitiro aunofambisa mbeva anosarudza kona yepasi uye nedanho bhora rave kunanga mukati. Izvi zvinoita kuti kuwana mari zviome kupfuura zvazvinonzwika.
Neverball iri mune zvinyorwa zvekusiyana kwakasiyana uye zvakare inowanikwa yeWindows ne Mac.
Uyu ndiwo mutambo wechivanhu. Ukasuwa kurwa kwenzvimbo kwema90, uyu ndiwo mutambo wako. Nezviitiko zve3dd uye 2d kurwisana, iwe unofanirwa kudzivirira iyo giraxy kubva kuuto revanopinda nechikepe vanoda kutibvisa.
Iyo purogiramu inokutendera iwe kuti uchinje kubva kune Arcade modhi kuenda kune simulator modhi nenzira dzakasiyana siyana dzekugadzirisa.
Tinogona kuisa astromenace kubva kunzvimbo dzekuchengetedza. Kune mamwe mavhezheni eWindows ne Mac.
Mutambo unoitika mune imwe nyika yakaparadzwa nekukonana pakati pemarobhoti uye nevanatenzi vavo vevanhu. Tinofanira kutungamira Tux mauriChido chekununura nyika kubva kune akasimba emarobhoti mhondi dzisingazive tsitsi. Munguva yemutambo wese isu tine rusununguko rwakakwana rwekusarudza nzira yatinoda kutevera.
FreeandroidRPG inobvumira yakatarwa kana melee kurwa. Mupfungwa iyoyo, yakafanana nemutambo wepfuma Diablo. Izvo zvinoita zvakare kugadzirisa maitiro emarobhoti emuvengi. Tinogona kushandisa zvinopfuura makumi mashanu mhando dzezvinhu uye kurwisa vasingaverengeki mhandu.
Yepamberi nhaurirano system inopa mamiriro enhau uye mamiriro ekutamba-mamiriro.
Vagadziri vacho vanovimbisa kunakidza kweanopfuura maawa gumi.
Ehe, mutambo uyu hausi mune zvekuchengetedza. Ose ari maviri maLinux vhezheni, iyo Windows vhezheni, iwe unofanirwa kuinyora. Nekudaro, iyo yewebhusaiti yekuvandudza inotsanangura maitiro ekuzviita.
Mutambo uyo usingamboshayike mune dzakawanda mbiru dzerudzi urwu. Ndezvekuti iwo magiraidhi akanaka chaizvo, matambudziko acho anonakidza, uye iyo yekudzidzira curve yakaderera.
Maitiro acho ari nyore, unosarudza semutyairi mascot eakavhurwa sosi chirongwa, iwe unosarudza mhando yemuyedzo uye track kana shasha. Miedzo ndeiyi; Mujaho wakajairwa, mujaho wakanangana newachi kana chikuru prix
Super Tux Kart zvinokumanikidza kuti usangane nematambudziko akareruka kuitira kuti utarisane neakaomesesa. Paimbove nehunyanzvi hwekuvhura ivo, asi hazvishande.
Kubva paInternet unogona kudhawunirodha dzimwe nzira uye mota.
Chirongwa ichi chinowanikwa kuLinux mune zvinyorwa, kuwedzera kune zvitoro zveFlatpak neSnap. Iyo inewo mavhezheni eWindows, Mac, uye Android.
Ini ndinopedza nekujekesa kuti urwu runyorwa rwakareruka rwemazano. Ini ndinoda Neverball neSuper Tux Kart, vamwe varipo nekuti vanosangana nemamiriro ekuvhurwa sosi single player mitambo. Kana paine chero iwe aunoda kuwedzera kune iyo rondedzero, iwe unotoziva kuti fomu rekutaura rinoshanda sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vhura sosi imwe chete mitambo yemitambo
Ini ndaizowedzera kuDungeon Crawl Stone Soup zvese mune yayo graphic vhezheni (kukambaira-mataera) uye mune zvinyorwa (kukambaira). Iyo huru roguelike ine kunetseka kwakanaka, uyezve ine nharaunda yakakura yevatambi. Inogona zvakare kuridzwa zvese kuburikidza netelnet kana ssh uye mubrowser.
Imwe yandaizotaura ndeye GNURobbo, kutaura zvekare pakati pemapuzzle. Inonakidza kwazvo.
Ndiri kuzovaedza. Ndatenda.
Kana iwe ukaisa Neverball, zvakare isa Neverputt, iyo inobva kukambani imwechete uye inodhakwa zvakanyanya miniature gorofu.
Ndiri kuenda kuiyedza. Ndatenda
Ksnip: pamwe ndiyo yakanakisa imwe nzira kune Shutter paLinux